आज असार १५ दहि चिउरा खाने दिन, स्वास्थ्यको लागि कति लाभदायक ? | Tapaikokhabar
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : असार १५, २०७६ शिक्षा-स्वास्थ्य
आज असार १५ गते अर्थात मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन । कृषकहरुले काम गर्दै दही चिउरा खाएर धान दिवस मनाउने गर्छन् ।
सांस्कृतिक महत्व बोकेको दही चिउरा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि त्यत्तिकै लाभदायक मानिन्छ । जानौं कसले खाँदा फाइदा हुन्छ रु कसरी खाँदा स्वास्थ्यलाई लाभ पुग्छ ?
दूध फाटेर बन्ने दहीमा क्याल्सियम, सोडिमय, पोटासियम र भिटामिन पाइन्छ। यसमा शरीरमा फाइदा गर्ने गुड ल्याक्टोब्यासिलस ब्याक्टेरिया समेत हुन्छ। चिउरामा भने कार्बोहाइड्रेट, आइरन र प्रोटिन पाइन्छ।
दहीले मांशपेसी र हाड बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ।
दही बनाउने ल्याक्टोब्यासिलस ब्याक्टेरियाले पाचन प्रक्रियामा सहयोग पुग्छ ।
दहीमा क्याल्सियम र मिनरल बढी मात्रामा पाइन्छ ।
पेट गडबडी हुँदा अर्थात् पखाला लागेको समयमा दहीको सेवन गर्दा पखाला कम हुन्छ ।
चिउरा पकाउनु नपर्ने भएकाले हामीले जुनसुकै परिकारका साथ खान सकिन्छ
।प्रशस्त कार्बोहाइड्रेड भएकाले काम गर्न शक्ति प्रदान गर्छ ।
फलामको ओखलमा कुटेको चिउरामा आइरनको मात्रा बढी हुन्छ ।
यस भन्दा अगाडीविश्वकप क्रिकेट : आज आयोजक इङ्ल्यान्ड र भारत भिड्दै
यस पछिधादिङमा बस दुर्घटना २ जनाको मृत्यु